အာဟာရက ကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ? - Chit MayMay
Home Parenting Child Nutrition အာဟာရက ကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ?
သင့်ကလေးက စိတ်အားထက်သန်မှု မရှိတာမျိုး၊ အာရုံစူးစိုက်မှု ခက်ခဲတာမျိုး (သို့) ကျောင်းမှာ စိတ်မဝင်စားတာမျိုး ဖြစ်နေသလား? သူစားနေတာတွေကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အာဟာရက ကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို သင်ထင်ထားတာထက် ပိုအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ဟာ စာသင်နှစ်တွေမှာ အိပ်စက်ခြင်း အလေ့အထ၊ ကစားခြင်းနဲ့ စာကျက်ခြင်းကြား ဟန်ချက်ညီမှု စတာတွေကို အထူးဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေ စားသုံးတဲ့အရာကိုရော ဂရုစိုက်မိကြပါသလား?
အာဟာရက ကျောင်းစွမ်းဆောင်ကို အကျိုးသက်ရောက်ပုံအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ ဦးနှောက်က အာရုံကြောအသစ်တွေ အဆက်မပြတ်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာ မမေ့နိုင်ပါဘူး။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က ကလေးတစ်ဦးရဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ယူပါတယ်။ သူတို့လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓါတ်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ အစားအသောက်က သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။
၁။ Omega3နဲ့6တို့က အာရုံကြောဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ကောင်းပါတယ်
ယေဘုယျအားဖြင့် bluefish မှာ ဦးနှောက်က ထုတ်ပေးတဲ့ လျှပ်စစ်တွန်းအားတွေကို ပို့လွှတ်ပေးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်သော အိုမီဂါ ၃ဖက်တီးအက်ဆစ် (DHA) ပါရှိပါတယ်။ သူတို့က သင်ယူမှုနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး အာရုံကြောဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုလည်း လွယ်ကူချောမွေ့စေပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို ဆော်လမွန်၊ ဆာဒင်းငါး၊ သစ်ကြားသီး၊ chia seeds နဲ့ တခြားအရင်းအမြစ်တွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၂။ စွမ်းအင်အတွက် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်
ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်က သကြားဓါတ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါ စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းပြီး ဦးနှောက်အတွက် လောင်စာလိုပါပဲ။ အရေးကြီးဆုံးက စုပ်ယူမှု နှေးကွေးသော ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို ကလူးကို့စ် အဆက်မပြတ် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဥပမာ အစေ့အဆန်တွေ၊ ခေါက်ဆွဲနဲ့ အာလူးတွေမှာ စုပ်ယူမှု နှေးကွေးတဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်က အကောင်းဆုံးသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် အရန်ဓါတ်ကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့အား ဂလူးကို့စ်ပေးသော အစားအစာတွေ အဆက်မပြတ် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၃။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆီရိုတိုနင်
Tryptophan က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုချမ်းသာ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ စိတ်ခံစားချက်အတွက် တာဝန်ရှိသော ဆီရိုတိုနင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဥ၊ အသားနဲ့ ငါး၊ နေကြာစေ့၊ ချောကလက်နဲ့ နနွင်းတို့မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၄။ နျူရွန်ဆဲလ်တွေ အားကောင်းဖို့အတွက် Choline
Neurotransmitters တွေက နျူရွန်ဆဲလ်တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပေးပို့ဖို့ တာဝန်ယူရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် ကြက်ဥမှာပါတဲ့ choline လိုမျိုး, ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အခွံမာသီးနဲ့ နို့တွေမှာလည်း choline ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
၅။ ပိုပြီး တတ်ကြွဖျက်လတ်တဲ့ နျူရွန်တွေအတွက် Fatty acids
အခွံမာသီးတွေ၊ ထောပတ်သီးနဲ့ သံလွင်ဆီတွေမှာ mono-saturated နဲ့ poly-saturated အဆီတွေ ပါဝင်ပါတယ်၊ ဒီအရာတွေက မှတ်ဉာဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အာရုံကြောဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပိုထိရောက်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
၆။ အပန်းပြေဖို့အတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်
ကယ်လ်စီယမ်က အာရုံကြော လှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်ဓါတ် ချို့တဲ့ပါက hyperactivity (သို့) ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်သလို ဦးနှောက်ကိုလည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်က ကလေးငယ်တွေအား အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုကောင်းစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နှမ်းစေ့တွေက သစ်ကြားသီး၊ အစိမ်းရောင်အရွက်တွေနဲ့ နို့ကဲ့သို့ ကယ်လ်စီယမ် အရင်းအမြစ် ကြွယ်ဝပါတယ်။
၇။ ပရိုတင်းနဲ့ သံဓါတ်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွဖျက်လတ်စေပါတယ်
အသားတွေက ပရိုတင်းနဲ့ သံဓါတ်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရင်းအမြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ပဲတောင့်ရှည်မျိုးတွေမှာလည်း နှစ်မျိုးလုံးအမြောက်အမြားပါဝင်ပါတယ်။ ပဲတောင့်ရှည်ပဲတွေမှာ အာရုံကြောဆဲလ်တစ်ခုစီဆီသို့ အောက်ဆီဂျင်ရောက်ရှိစေဖို့နဲ့ အာရုံကြောအသစ်တွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ ဦးနှောက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရအားလုံးကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တတ်ကြွမှုနဲ့ ဉာဏ်ကောင်းမှုက သံဓါတ်နဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်ကို မှန်ကန်စွာ စားသုံးခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
၇။ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေက အာရုံကြော ယိုယွင်းခြင်းကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်
ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ လိုင်ကိုပင်တွေက ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဘယ်ရီသီး၊ ငှက်ပျောသီးနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့်တွေက ဆဲလ်တွေရဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မဟာမိတ်တွေပါ။
Previous articleသမီးမိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်မလုံခြုံမှုကို တိုးလာအောင် လုပ်မိနေတဲ့ နည်းလမ်း (၄)ခု
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ အဆင့်၅ဆင့်မှာ အမျိုးသမီးတွေ စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာများ